VALO NO VOASAMBOTRA : Sarona i Moustafa atidoha amin’ny fanondranana vehivavy malagasy any Koweït
Taorian’ny nahatratrarana ireo olona efatra, izay mpiasan’ny minisitera ny roa lahy ary vehivavy haondrana any Koweit ny roa, dia lehilahy iray hafa indray antsoina hoe Moustafa, anisan’ny tompon’antoka mpanondrana vehivavy mankany Koweït no saron’ny Polisim-pirenena. 18 avril 2017
Tratra niaraka taminy ihany koa ny vehivavy valo izay efa teo am-panomanana ny hiondrana any amin’ity firenena ity. Araka ny vaovao voaray ny polisy miasa ao amin’ny “Service Central des Enquêttes et la lutte Contre les Fraudes Documenatiares » Anosy na SCECFD, dia misy lehilahy iray manao fitadiavam-bola amin’ny fanondranana olona any Koweït, eny Antsahameva Ankatso.
Tra-tehaky ny Polisy i Moustafa, ny zoma lasa teo. Voatazon’ny Polisy ihany koa ny vehivavy valo izay niandry fotoana handehanana fotsiny, tao an-tranon’ity lehilahy ity. Mba hahamora ny fahavitan’ny pasipaoron’ireo tovovavy hiasa any ivelany ireo, dia nanamboatra “certificat de moralité” hosoka io lehilahy io. Tamin’ny fisavana ny tranon’ity farany no nahitana taratasy hosoka maromaro, toy ny fanamarim-ponenana sy “certificat de scolarité” ary fitombokasem-panjakana hosoka.
Momba ny fifanarahana indray, dia io lehilahy io no miantoka ny lany rehetra amin’ny fahavitan’ny pasipaoro, « Visa » ary saran-dalana amin’ny fiaramanidina. Ka rehefa tonga sy miasa any Koweit ilay olona dia manefa ny karamany dimy volana ireo tovovavy. Mialoha ny hialana eto Madagasikara anefa dia manao antoka tany sy trano amin’ireo tovovavy ireo i Moustafa, ka rehefa tsy alefa ny karama dimy volana nifanarahana dia lasany ny antoka.
Ankoatra izay, dia mahazo vola 2 tapitrisa Ariary isaky ny olona alefany any amin’ny “agence” any Koweït ihany koa izy. Nahatrarana lelavola mitentina 17 800 000 Ariary tany amin’ity lehilahy ity sy “quittance western union” nandefasan’ilay “agence” any Koweït vola taminy. Natolotra ny Fampanoavana ny sabotsy lasa teo ilay lehilahy sy ireo voasambotra.